Fitsangatsanganana fiantsenana " Journey-Assist - firenena malaza miantsena.
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Fitsangatsanganana fiantsenana
Fitsidihana fiantsenana (fiantsenana - fitsangatsanganana)
Mazava ho azy fa mahaliana sy mahaliana hatrany ny fiantsenana. Mazava ho azy, azonao atao amin'ny fomba mandaitra izany nefa tsy miala ao an-tranonao, ao amin'ny rivo-piainana mahafinaritra sy mahitsy amin'ny akaninao, amin'ny fampiasana ny serivisy amin'ny fivarotana an-tserasera sasany, toy eto... Ary avy eo dia azo antoka fa hahazo be izay tadiavinao ianao nefa tsy mandany fotoana sy vola eny an-dàlana :).
Fa ho an'ireo izay manam-potoana be ary tsy mahita nofy hafa, afa-tsy ho azy ireo any amin'ny fivarotana ao Milan, dia ho anao izay rehetra voasoratra etsy ambany!
Fitsidihana fivarotana any ivelany
any ampitan-dranomasina fitsangatsanganana fivarotana Iray amin'ireo fomba mahaliana sy mahazatra indrindra hanavaozana ny fitafianao. Ity dia torolàlana somary tanora amin'ny fizahan-tany iraisam-pirenena. Ny mampiavaka ny dia toy izany dia bonus hafa amin'ny fitsangatsanganana any amin'ny magazay sy tsena: fifankahalalana amin'ny firenena, fialantsasatra amoron-dranomasina, fanamaivanana vetivety amin'ny fanahiana isan'andro. Noho izany, eo amin'izao tontolo izao dia orinasam-pitaterana maro no mikarakara fitsangantsanganana any ivelany. Mandritra izany fotoana izany dia hisy foana ny mpanampy amin'ny fiantsenana miaraka aminao, izay hilaza aminao hoe aiza, inona no hatao. Voalamina ho anao ny famindrana ilaina rehetra, afaka manome fiara izy ireo amin'ny dia lavitra.
Fitsangatsanganana fiantsenana, matetika ny fitsangatsanganana isan-kerinandro. Faharetan'ny andro indroa ka hatramin'ny herinandro. Matetika ny fitsangatsanganana toy izany dia voatokana amin'ny fialantsasatra na fety (ohatra, ny varotra amin'ny taom-baovao), ho fankalazana ny fivarotana sy ny fihenam-bidy lehibe omena azy.
Ny fanomezana rehetra amin'ity karazana ity dia mizara ho vondrona lehibe 2: tsy fitsidihana fivarotana tsy misy fepetra и miaraka amin'ny adidy. Ny tsirairay amin'ireo safidy ireo dia manana fanenjehana sy fahazoana sasany.
Tsy fitsidihana fivarotana adidy
Ny dia toy izany dia midika fa ny mpizahatany dia mandoa ny vidin'ny dia ary manan-jo hividy na inona na inona vidiny. Ankoatr'izay dia mety tsy mividy na inona na inona mihitsy izy - ny karazany aseho indraindray tsy manome aingam-panahy fotsiny. Misy ny fotoana aleha amin'ny fiantsenana toy izany any amin'ny firenena, manomboka vorontsilozaampy Italia. Noho izany antony izany, ny fitsidihana an'io karazana io dia malaza amin'ireo izay mikasa ny hividy entana amin'ny sokajy samihafa: akanjo, fitaovana elektronika, vokatra fanaka.
Ny fitsangatsanganana fivarotana tsy misy adidy dia mety amin'ny vidiny ihany, izay ambany lavitra noho ny vidin'ny tora-pasika na fitsangatsanganana fitsangatsanganana. Afaka, tsy mividy na inona na inona ianao dia misafidy fialan-tsasatra ihany ao amin'ny firenena. Marina fa tsy maintsy mipetraka ao amin'ny hotely ianao, izay hifidy orinasa mpandehandeha. Izany hoe, tsy azo atao firy amin'ny safidy tsy miankina hotely. Ary ny fametrahana amin'ny fotoana iray ihany dia tsy midika afa-tsy fampiononana fototra fotsiny. Raha resaka resaka fialam-boly dia tsy tsara koa ny zava-drehetra: tsy mandeha ny fitsangatsanganana mikarakara.
Ny fitsidihana ny fivarotana
Ity karazana fitsangatsanganana ity dia midika fa ny mpizahatany dia mandoa ny vola faran'izay kely indrindra amin'ny fitsangatsanganana (izay matetika ara-bakiteny ara-bakiteny - 1 euro), kanefa dia voatery hividy entana amin'ny vola iray izy, izay mazàna mitovy amin'ny tena vidin'ny fitsidihana.
Ny fitsangatsanganana fiantsenana toy izany any amin'ireo firenena antsoina hoe fiantsenana "manam-pahaizana" dia miely patrana. Ny iray amin'ireo tena tadiavina indrindra dia i Gresy miaraka amin'ny indostrian'ny volony.
Ny fitsangatsanganana toy izany dia ampahany amn'ny orinasa sy toeram-pivarotana izay mamarana ny fifanarahana amin'ny orinasam-pitaterana. Momba ny fandaniana ilaina amin'ny fizahantany, dia aloa ny fandaniana trano sy sidina. Izany rehetra izany dia mamela ny orinasa hivarotra tombony amin'ny tombony.
Indrindra fa raha ny fitsidihana iray mitsidika Gresy raha ny endrika endrika fitsidihana miantsena miaraka amin'ny adidy, dia mety takiana ny mpizahantany mividy entana volon'ondry mandritra ny 1 euros. Tsy misy vidiny fanampiny: tsy mila mandoa vola izy noho ny serivisy eny amin'ny làlana na ny tany.
Fizarana hafa amin'ny orinasa sy trano lehibe any Eropa no miasa amin'ity tetik'asa ity. Koa satria ny ankamaroan'ny tranga dia ambany noho ny vidin'ny volom-borona ny vidin'ny akanjo sy ny kiraro, mety hihena ho 600 ny haben'ny vola mandoa.
Iza no fitsidihana hisafidy
Rehefa misafidy fitsidihana izay mety aminao indrindra ianao, ny traikefa no mpanolo-tsaina tsara indrindra. Ohatra, ny fandehanana fitsangatsanganana miaraka amin'ny adidy any Gresy ao ambadiky ny akanjo lava volo, raha toa ka fantatrao tsara ny tena ilainao, ary fantatrao ny asan'ny orinasa eto amin'ity firenena ity. Raha tsy izany, dia misy diso fanantenana. Rehefa dinihina tokoa, ny entana ilaina dia mety tsy ho hita, vokatr'izany dia voatery ho voatery hividy zavatra tsy tena tianao ianao.
Ny fitsangatsanganana tsy miankina dia manome ny tombony amin'ny safidy malalaka, saingy mila mandoa ny vidin'ny dia ianao. Mba hiantohana ny fahaleovan-tena tanteraka dia afaka mandeha irery ianao, ohatra, mankany Italia, avy eo ampiasao ny serivisin'ny consultant eny an-toerana na "manakodia" ny toeram-pivarotana na mivoaka ny tenanao.
Firenena malaza amin'ny fitsangatsanganana fivarotana
I Torkia dia iray amin'ireo firenena takiana indrindra amin'ny fizahan-tany fizahan-tany. Tsy mitovy amin'ny haavon'ny vidiny ambany raha oharina amin'ny ankamaroan'ny firenena hafa noho ny entana mitovy kalitao. Tombony iray lehibe dia lehibe indrindra amin'ny vokatra rehetra, manomboka amin'ny akanjo marika hatramin'ny karipetra mahafinaritra sy firavaka mihaja.
Ny fandehanana an-dalambe any Paris dia ahafahanao mankafy ny tontolo mahafinaritra amin'ny tanàna romantika taloha, lasa tompon'ny zavatra mahafinaritra toy ny souvenir mahafinaritra, satroka tany am-boalohany, akanjo sy kiraro manaitra, firavaka misy kalitao. Ankoatra izany, mitombina ny mandeha any amin'ny butileta marika Chanel, izay ahafahanao mahazo fahafinaretana mahafinaritra rehefa mividy tavoahangy misy fofona mahafinaritra.
Ny fiantsenana eto amin'ity firenena ity dia azon'ny olona manankarena tokoa, satria ny butikety anglisy dia mahalala ny vidiny ary tsy mikendry ny hampifaly ny rehetra. Na izany aza, ireo izay mbola nahavita niditra tao amin'izy ireo dia azo antoka ny serivisy avo lenta sy ny safidy malalaka indrindra. London dia toerana ifantohan'ny fivarotana saika ny orinasa rehetra manana ny lazany manerantany, ary azonao atao ny mividy eto, ankoatry ny akanjo sy kojakoja, ary koa firavaka, fahatsiarovana, fahagola, zavamaneno, kitapo sy kiraro.
Io dia an'ny firenena eropeana manana fizahan-tany fizahantany mandroso indrindra. Ny antony dia, ankoatry ny karazan-vokatra am-boalohany sy avo lenta, dia ny fahafaha-mividy ihany koa. Ankoatr'izay, i Alemana no mpitarika manerantany amin'ny faharetan'ny varotra sy ny haben'ny fihenam-bidy. Tena manintona tokoa ireo mpizahatany vahiny tonga eto mba hitsangatsangana.
UAE (Emirà Arabo Mitambatra)
Ny sokajy lehibe entana alehan'ireo mpizahatany miantsena any Emirates dia firavaka. Betsaka koa ny firavaka avo lenta sy manokana vita amin'ny vato sy metaly sarobidy. Ireo vokatra any UAE ireo dia mahaliana fa tsy ho an'ny mpizahatany tsotra izay faly manambatra fialan-tsasatra mahafinaritra sy fividianana bargain, fa koa ho an'ny tompona fivarotana firavaka, ary koa ho an'ireo firavaka firavaka izay nahazo aingam-panahy avy amin'ireo mpiara-miasa miasa any Moyen Orient. Ny tanàna malaza indrindra amin'ny fizahan-tany fiantsenana eto amin'ity firenena ity dia Dubai. Io no ivom-barotra lehibe indrindra.
Milan no renivohitry ny lamaody sy ny fiantsenana ary miaraka amin'izay koa paradisa ho an'ny fashionista tsara tarehy! Fivarotana marika marobe. Versace, Fendi, Gucci, Prada, Etro, Cavalli, Ferre, Moschino, Armani, Valentino, Dolce & Gabbana, sns. Ho fanampin'ny boutiques fanta-daza, ao afovoan'i Milan dia misy fivarotana mivarotra akanjo sy kiraro tamin'ny vanim-potoana teo aloha miaraka amin'ny fihenam-bidy hatramin'ny 50% - 70%. Izany rehetra izany dia manana toerana ho any Milan.
Ny tombony lehibe amin'ny fitsidihana fivarotana dia azo raisina ho fanavaozana ao amin'ny valizy. Afaka mirehareha amin'ny namanao ianao momba ny akanjo vaovao, hankafizanao ny zavatra tsara izay efa nanompo nandritra ny taona maro. Ary ho an'ireo mifandray amin'ny varotra, ny vokatr'iny fitsangatsanganana iny dia mety ho mahazo tombony amin'ny fivarotana akanjo lamaody.